Ururka Ikhwaanul Muslimiin ee dalka Masar oo dhisay xisbi cusub – SBC
Ururka Ikhwaanul Muslimiin ee dalka Masar oo dhisay xisbi cusub
Cairo:- Ururka walaalaha Muslimiinta ama ikhwaanul musilmiin ee dalka Masar ayaa dhisay xisbi cusub ay ugu magac dareen xisbiga xoriyadda iyo cadaalada , kaasi oo ay meelmariyeen xubnaha golaha wadatashiga kadib kulankii ugu horeeyey ay ku yeesheen magaalada Al-qaahira muddo 16 sano ah.
Madaxa xisbiga cusub Maxed Mirsi oo shir jar’aaid qabtay ayaa sheegay in xisbigan cusub uu yahay mid rayid ah balse uusan ahayn xisbi islaami ah ama xisbi ku dhisan afkaar Diimeed.
Sidoo kale Dr Cisaam Caryaan oo ah hogaamiye sare oo katirsan ururka ayaa loo magacaabay kuxigeenka gudoomiyaha cusub ee xisbiga halka ninka lagu magcaabo Sacad Al-kataatani loo magacaabay xoghayaha guud ee xisbiga cusub.
Jamaacada Ikhwaanul Muslimiin bayaan ay soo saartay ayey ku sheegtay in ay tahay hay’ada Islaami ah islamarkaana xisbigan cusub uu yahay mid ka tarjumaya howlaha siyaasadeed ee ururka Ikhwaanul Muslimiin-ka uu uga shaqeenayo maslaxadda dalka Masar.
Jamaacadda Ikhwaanul Muslimiin oo ah Xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Masar ayaanan wax kuraas ah ku guuleysan doorashadii ugu dambeesay ee kadhacday dalka Masar marka laga reebo shakhsiyaat si madax banaan uga qeyb gelay doorashooyinkii barlamaaniga ee kadhacay dalka Masar dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay kuwaasi oo lagu tilmaamay in ay ahaayeen kuwo lagu shubtay.
Ururka Ikhwaanul Muslimiin dalka Masar ayaa waxaa aasaasay Sheekh Xasan Al-banaa sanadii 1928.
SBC International- Monitoring